Dr. Mario World wuxuu gaarayaa 7,5 milyan oo soo dejin bishii ugu horreysay | Wararka IPhone
Dr. Mario World wuxuu gaarayaa 7,5 milyan oo soo dejin bishii ugu horreysay
Toni Cortés | | Ciyaaraha IPhone, dhowr
Dr. Mario World wuxuu gaarayaa 7,5 milyan oo soo degsasho ah bishii ugu horreysay ee nolosha. Waqti aan fogayn Nintendo wuxuu go'aansaday inuu suuqgeeyo cayaaraheeda meel ka baxsan qunsuliyadaha.
Tani waa ciyaartiisii ​​shanaad ee loo sii daayo qalabka mobilada, waana markale guul.
Sida ku cad xog ay daabacday Sensor Tower, Dr. Mario World waxaa lagala soo degay 7,5 milyan oo jeer 30-ki maalmood ee ugu horeysay noloshiisa, labadaba macruufka sida Android. Waxay soo saartay dakhli dhan 1,4 milyan oo doolar.
Haddii ay run tahay haddii aan isbarbar dhigno tirooyinka soo degsashada iyo ururinta inta ka hartay ciyaaraha Nintendo ee taleefannada gacanta maahan inay toogtaan gantaallo, laakiin waa inaan maanka ku haynaa inay tahay ciyaar xujo ah, nooca Tetris, oo wareegeedu aad u yar yahay. maanta. Tani waa xog aad u fiican shirkadda.
Hadaan isbarbar dhigi karno Dr. Mario iyo Geesiyaasha Sega, tusaale ahaan. Waa ciyaar isku qaab ah, nooca xujada, iyo Sega, tartanka tooska ah ee Nintendo. Hagaag, 30-kii maalmood ee uhoreeyay, waxaa lasoo dejiyay 195.000 jeer, oo aruuriyay $ 340.000 (oo aan kujirin Japan iyo South Korea). Farqiga u dhexeeya waa abysmal.
Sida laga soo xigtay Sensor Tower, 55% wax iibsigu wuxuu ka yimaadaa isticmaaleyaasha Japan, oo aad daacad ugu ah Nintendo, oo leh tiro iibsasho ah 770 oo doolar. Suuqa Mareykanka ayaa raacaya, iyada oo la aruuriyay $ 462.000. Xusuusnow in xogtan ay yihiin 30-ka maalmood ee ugu horreeya ee laga heli karo dukaamada.
Nintendo wuxuu go'aansaday inuu ka faa'iideysto dariiqa moobiilka ee loo yaqaan IOS iyo Android, si fiicanna wuu ugu socdaa iyaga. Ciyaarta soo socota ee imaaneysa waxay noqon doontaa Mario Kart Tour, oo loo qorsheeyay in la sii daayo seddexaad seddexaad ee sanadkan. Ciyaarta caanka ah ee loo yaqaan 'Mario tartanka', markan waxay lahaan doontaa nooca Free-to-Play. Xaqiiqdii waxay noqon doontaa guul la hubo markale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Dr. Mario World wuxuu gaarayaa 7,5 milyan oo soo dejin bishii ugu horreysay
Waqtigaan la joogo waxaan u maleynayaa inaan sii wadi doono ciyaarida noocyada kale ee ciyaaraha sida Brawl Stars ama qaabkan, runtu waxay tahay iyadoo super mario run waan niyad jabay kan cusubna ee dhakhtarka maryo ma aqaano inuu qiimo badan yeelan doono ...
Hagaag, waa ciyaar gogo ', sida Tetris, Candy Crash, iwm. dhigay ee Mario caalamka. Haddii aad jeceshahay noocyadan cayaaraha ah, isku day. Wadar, waa bilaash!
Jawaab Toni Cortés
Facebook ayaa lacag siisay cid saddexaad si ay u soo qoraan cajaladaha Facebook Messenger
Sebtember 10 waa taariikhda ay u badan tahay in la arko iPhone 11